Nyowani yakaoma macheki ePrague Airport epasirese vanosvika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Nyowani yakaoma macheki ePrague Airport epasirese vanosvika
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kusvikira paine chimwe chiziviso, shanduko dzinoitwa paPrague Airport zviteshi zvinokanganisa vashanyi pamwe nevagari vemuCzech Republic nenyika dzeEU + vachidzokera kuCzech Republic.
Prague Airport kusimbisa cheki yevatakuri pakusvika.
Prague Airport inosimbisa kudzora kwazvino mamiriro ezvinhu ekupinda munyika.
Kubva munaGunyana 1, 2021, maitiro ekusvika kune vese vafambi vanobhururuka kuenda kuPrague Airport ichagadziriswa.
Sezvinoenderana nedziviriro nyowani inoitwa nebazi rezvehutano reCzech Republic, Prague Airport, Mapurisa ekunze eCzech Republic neCustoms Administration yeCzech Republic inosimbisa kudzora kwenzvimbo dziripo dzekupinda munyika.
Pamwe chete, mapato acho anopindura traffic inowedzera zvishoma nezvishoma pa Prague Airport uye mukana wekushanyira nyika kune zviitiko zvekushanya nevatorwa.
Kubva 1 Gunyana 2021, maitiro ekusvika kune vese vafambi vanobhururuka kuenda Václav Havel Airport Prague ichagadziriswa. Kusvikira paine chimwe chiziviso, shanduko dzinoitwa pane ese maPrague Airport zviteshi zvinokanganisa vashanyi pamwe nevagari ve Czech Republic uye nyika dzeEU + dzichidzokera kuCzech Republic.
Nhandare inoramba ichikurudzira vafambi kuti vanyatsoongorora mitemo yakashandiswa zvisati zvaitika. Vasati vaenda kuPrague, vaifanira kunge vakagadzirira, uye vachinyora zvakadhindwa, zvese zvinyorwa, mafomu ekusvika nekusimbiswa kwekusava neutachiona, kana zvichidikanwa.
“Tiri kuratidzira modhi itsva iyi nevamiriri vebazi rezvehutano nemamwe mauto anochengetedza varipo panhandare yendege. Tiri kuwedzera vashandi vedu kugona uye nekusimbisa michina yekumhanyisa kuti ikurumidze kuita kwese kwevanosvika. Vapfuuri vanogona kubatsira kumhanyisa cheki yekuCzech yekuuya, zvakare, nekuongorora mamiriro azvino nekugadzirira zvinyorwa zvese pamberi, "Jiří Kraus, Mutevedzeri Wachigaro wePrague Airport Board of Directors, vakadaro.